မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အငယ်စား ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထိုင်းအစိုးရဘဏ်များ ငွေထုတ်ချေးရန် စီစဉ်။ တပ်မတော်အစိုးရနှင့် ဆန္ဒပြသူများ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရသော ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များကို ထိုင်းဘဏ်များငွေထုတ်ချေးရန် ပရာယွတ်အစိုးရဝန်ကြီးဋ္ဌာန ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမည် – H2Oupdatenews
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အငယ်စား ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ထိုင်းအစိုးရဘဏ်များ ငွေထုတ်ချေးရန် စီစဉ်။ တပ်မတော်အစိုးရနှင့် ဆန္ဒပြသူများ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရသော ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များကို ထိုင်းဘဏ်များငွေထုတ်ချေးရန် ပရာယွတ်အစိုးရဝန်ကြီးဋ္ဌာန ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်
တပ်မတော်အစိုးရနှင့် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် တစ်လနီးပါးကြာမျှ ပိတ်ထားခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အငယ်စားထိုင်းစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များကို အတိုးနှုန်းနည်းသော ချေးငွေများ ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ထားကြရန် ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထိုင်းအစိုးရပိုင်ဘဏ်များအား တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု Bangkok Post က ယမန်နေ့ ရေးသားသည်။…
ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ခွင့်ပြုခဲ့သော #GSP ခေါ် #ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးအကျိုးခံစားခွင့်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် နေပြည်တော်အနေဖြင့် အမေရိကန်ဈေးကွက်အတွက် ပို့ကုန်ပစ္စည်းအချို့တွင် အကောက်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအား ပို့ကုန်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် အသုံးပြုသည့် ထိုင်းကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အနေဖြင့်လည်း စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာခဲ့ရသည်။…
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ စက်ရုံများနှင့် ဈေးဆိုင်များအား ထောက်ပံ့ရန် ငွေကြေး မလုံမလောက်ဖြစ်နေပြီး ယာယီပိတ်ထားရမည့်အခြေဆိုက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ထိုအတွက် ထိုင်း-မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာကောင်စီ TMBC နှင့် ဘဏ်များအကြား ဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ အမြဲတန်းအတွင်းဝန်က ကြားခံညှိနှိုင်းသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘဏ်များတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ပို့ကုန်-သွင်းကုန်ဘဏ်၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့လည်းပါဝင်ပြီး လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ချေးငွေရရှိရေးအတွက် ပူးပေါင်းအဖြေရှာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးက ရှင်းပြသည်။…
မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကာလအတွင်း ထိုင်းလုပ်ရှင်များအများအပြားတို့မှာ ၎င်းတို့၏ စားသောက်ဆိုင်၊ SPA နှင့် အနှိပ်ခန်းတို့ကို ပိတ်ထားခဲ့ရသဖြင့် ငွေပေါ်လွယ်မှုပြဿနာနှင့် ပြင်းထန်စွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အထိနာလျှက်ရှိပြီး အခွန်အခပေးဆာင်နိုင်ခြင်း မရှိယုံမက မည်သည့်အချိန်ထိ လုပ်ငန်းများ ပိတ်ထားရမည်ကိုလည်း မသိနိုင်သေးကြောင်း၊ ဘဏ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား စကားပြောဆိုရန် ချိန်းဆိုထားကြောင်း ထိုင်း-မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာကောင်စီ TMBC ဥက္ကဋ္ဌ အွန်ဗီတူဆက်တီက ပြောဆိုသည်။
(((Bangkok Post.,5APR 2021,” Commerce Ministry acts as Myanmar go-between. Thai firms reeling in neighbouring state. By: PHUSADEE ARUNMAS ” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီ လျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာ သာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: ရုရှားလုပ် Pantsir-S1 ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော လေကြောင်းကာကွယ်ရေး စက်အမြောက်တွဲ ဒုံးကျည်စံနစ်များ မြန်မာစစ်တပ်ရရှိနေပြီ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်များမှစ၍ အဆင့်မြင့် ခေတ်မီ ဝေဟင်မြေပြင်သုံး ခေတ်ပေါ်ဗားရှင်း စစ်လက်နက်/ယာဉ်များ မြန်မာရရှိခဲ့
Next Next post: အီရန်သူလျှိုသင်္ဘော တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ပင်လယ်နီရေလမ်းကြောင်းတွင် ပျက်စီးနေဟု သတင်းထွက်ပေါ်။ ရေငုပ်သင်္ဘောမှ တော်ပီဒိုထိမှန်သည်ဟု အစ္စရေးပြော၊ သံလိုက်မိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရသော်လည်း အနည်းငယ်ပျက်စီး၍ လူအသေအပျောက်မရှိဟု အီရန်ဆို